Quizdom - Play Trivia To Win Real Money 1.5.2 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.5.2 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
ဂိမ္းမ်ား ဥာဏ္စမ္း Quizdom - Play Trivia To Win Real Money
Quizdom - Play Trivia To Win Real Money ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အဘယ်ကြောင့် Quizdom 2019 ခုနှစ် လူကြိုက်အများဆုံး trivia ဂိမ်း ပါသလဲ
& # 127920; Quizdom နေ့တိုင်းဆုရှင်များအတွက်အစစ်အမှန်ငွေ နဲ့ဆုကံကောင်းပိုက်ဆံ Win မှ 100% အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ် !!
& # 127920; Quizdom ပျော်စရာအဘို့အတူတူတက်မေးခွန်းတွေထုတ်ခဲ့မှစုံလင်သောအရာ, 16 အမျိုးအစား နဲ့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်မေးခွန်းများကိုထောင်ပေါင်းများစွာ၏အတူ trivia ပဟေဠိဂိမ်းပါ!
ဒါဟာလူတိုင်းဒီဂိမ်းအတွက်စိတ်ဝင်စားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရှာဖွေနိုင်သည်စသည်တို့ကိုအမှတ်တံဆိပ်ပဟေဠိ, Music, အသေးအဖွဲ (သီချင်းဖြစ်မယ်ထင်ပါလဲ), အကြောင်းအသေးအဖွဲဂိမ်းရဲ့အစအခမဲ့ scratcher, slot ကစက်တွေနဲ့ပဟေဠိစစ်တိုက်မှတဆင့်န့်အသတ်ငွေ Prize ကိုအနိုင်ရ။
- Quizdom ရဲ့အင်္ဂါရပ်များ -
& # 127775; ဦးဝင်းရီးရဲလ်ငွေ: ရီးရဲလ်ငွေအားကစားပြိုင်ပွဲ Play နှင့်ဦးဝင်းလက်ဆောင်ပေးမယ်စောင့်ရှောက်မှု, ငွေ!
& # 127775; 16 အမျိုးအစား Categories: အမှတ်တံဆိပ်ပဟေဠိ, Music, အသေးအဖွဲ, ပထဝီ, သိပ္ပံ, အားကစား, etc
& # 127775; ပဟေဠိတိုက်ပွဲ: လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်မိတ်ဆွေများကိုအတူ trivia မေးခွန်းတစ်ခုကိုစိန်ခေါ်မယ်! အနိုင်ရသူဖြစ်ခြင်းနှင့်ငွေသားရ !!
& # 127775; သငျသညျ WIFI သို့မဟုတ်အင်တာနက်မပါဘဲ ဘယ်နေရာမှာမဆိုနှင့်အချိန်မရွေးကစားနိုင်ပါတယ်။
& # 127775; နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအခမဲ့ဒင်္ဂါးပြားများနှင့်အမျိုးမျိုးသောဆုလာဘ်ရယူပါ!
& # 127775; သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုနှင့်အတူ Play အတူတကွတက်မေးခွန်းတွေထုတ်ခဲ့!
Quizdom ကိုလည်း quizzland နှစ်ဆပျော်စရာပါရှိသည်သည်အစစ်အမှန်ပိုက်ဆံအနိုင်ရနိုင်သည့်တစ်ဦး trivia ဂိမ်းပါ! ဒါဟာဦးနှောက်လေ့ကျင့်ရေးနှင့်အတူအံ့သြဖွယ်ကိုမှန်ကန်ပိုက်ဆံဂိမ်းများကိုယခုရှင်ဘုရင်၏အပဟေဠိဖြစ်ပဲ!
ဒါဟာသင်ဤ quizzland ၌သင်တို့၏အသိပညာစမ်းသပ်ရန်နှင့်ချဲ့ထွင်ရန်အဘို့အပဟေဠိအချိန် !!
အကြှနျုပျတို့သညျဤအသေးအဖွဲဂိမ်းထဲမှာပဟေဠိအချိန်ကိုခံစားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် - Quizdom !!
& # 128073; အခုဆိုရင်အခမဲ့ Download လုပ် !!
Quizdom - Play Trivia To Win Real Money အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Quizdom - Play Trivia To Win Real Money အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Quizdom - Play Trivia To Win Real Money အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
clement-neufciinq စတိုး 8.28k 2.03M
Quizdom - Play Trivia To Win Real Money ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Quizdom - Play Trivia To Win Real Money အခ်က္အလက္
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://resource.cdn.bbcget.com/soft/file/term/1272/WordsLogos_privacy.html
လက်မှတ် SHA1: 35:D5:C5:18:67:30:D4:D2:40:8A:AB:4E:08:4D:A8:19:98:F8:A0:89
ထုတ်လုပ်သူ (CN): wu
အဖွဲ့အစည်း (O): fungame
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): GZ
Quizdom - Play Trivia To Win Real Money APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ